Tag: manzwiro ongororo | Martech Zone
Tag: manzwiro ongororo
Svondo, Kurume 7, 2021 Muvhuro, October 18, 2021 Aleh Barysevich
Chitatu, Kukadzi 11, 2015 Svondo, October 4, 2015 Chris Hoyt
Anonyanya kushambadza Super Bowl kushambadza anogona kunge asiri iwo aunofunga. Nepo kugona kwedu kwekuunganidza data kuri kukura, kugona kwedu kunzwisisa data kuchiri kubata. KuPerscio, timu yedu yemasayendisiti e data akaongorora zvakadzama zviitiko zveTwitter panguva yeSupp Bowl uye akaona kuti kushambadza kwakakurumbira hakusi iko kuri kuwana mibairo yakanaka. Zvakare, pakupera kwechinyorwa chino maonero anopindirana e
Appinions: Iyo Ndiani, Chii uye Ndeipi Yekukurudzira Kushambadzira
Mamwe ekushambadzira tekinoroji mapuratifomu zera rakafanana newaini yakanaka sezvavanoramba vachisunungura nyaya dzinotambudza vashambadzi. Mazita anoita seimwe yemapuratifomu. Apo patakaita chinyorwa makore mashoma apfuura, yaive yakanaka diki chikuva iyo yaipa kurudziro nemusoro wenyaya uye munhu - yaibatsira kwazvo panguva iyoyo. Makore gare gare uye yakazara yekushambadzira chikuva iyo inogona kubatsira kuvandudza zvemukati marongero emakambani kuti awane simba mukati